कसरी एउटा ब्रोसर डिजाईन गर्ने: ब्रोशर डिजाइनिंगको A to Z - Print Peppermint
नोभेम्बर 25, 2018 | विज्ञापन, ट्यूटोरियल
ब्रोशर डिजाइनिंग संवेदनशील कला हो।
के पाब्लो पिकासो वा लियोनार्डो भिन्सी वा पुरानो समयका अन्य भर्चुसोहरू तुरुन्तै क्यानभासमा उफ्रन सके? No!
पहिले, उनीहरूले आफ्नो दिमागको गहिरो कुरोमा खोजे, आफ्ना उत्कृष्ट कृतिहरूका लागि ब्लुप्रिन्टहरू राखे, र त्यसपछि मात्र हामीले आज “कालरहित रत्न” भनेर चिनिने स्केच गरे।
त्यसोभए तपाईंले ब्रोसर डिजाइन गर्नेबारे सोच्नु अघि आफैलाई निम्न प्रश्नहरू सोध्नुहोस्।
के छ मेरो ब्रान्ड बाहिर पठाउन चाहान्छ सन्देश?
मेरो लक्ष्य बजार के हो?
म कसरी मेरो ब्रोसरको सफलताको नाप गर्न सक्छु?
ब्रोशरमा म कति खर्च गर्न सक्छु?
र तिनीहरूलाई सोध्नुहोस् जब सम्म तपाईं उत्तरहरू फेला पार्नुहुन्न जुन दिनको रूपमा स्पष्ट छ। अन्यथा, तपाइँको ब्रोशर डिजाइन फोकस, अप्रिलियस र सबै इन-सबै सबै एक गड़बड गड़बड बाहिर बारी जाँदैछ।
भाग्यवस, यी उत्तरहरूमा द्रुत रूपमा प्राप्त गर्नका लागि रोडम्याप छ। मलाई बाटो देखाउनुहोस्।
सम्बन्धित: ब्रोसर डिजाइन के हो?
मेरो ब्रान्डको सन्देश के हो?
डिजाइनको सौंदर्यशास्त्र बारे चिन्ता गर्न रोक्नुहोस्। तिनीहरू अन्ततः माध्यम आउँछन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त्यो पाठ हो जुन तपाईंको व्यवसायलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। अधिक विशेष रूपमा, तपाईंले आफ्ना पाठकहरूको ध्यान खिच्न प्रयोग गर्नुहुने शब्दहरू।
तर तपाइँ कसरी सहि शब्दहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ?
यो सरल हो: तपाईका ग्राहकहरूको बारेमा जान्न सबै कुरा भेट्टाउनुहुन्छ, उनीहरूलाई मनपर्ने उत्पादनहरू, उनीहरूको ग्राहकको ईतिहास, कस्तो प्रकारको भाषाले उनीहरूलाई पढ्न रुचाउँदछ - केही पनि तपाईले आफ्नो हातहरू लिन सक्नुहुनेछ। यस जानकारीलाई तपाईंको बाइबिलको रूपमा व्यवहार गर्नुहोस्, छायामा तपाईंको मार्गदर्शक प्रकाश।
म तिमीलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु।
मानौं तपाईं आफ्नो नयाँ बुकशपको विज्ञापन गर्न ब्रोशर डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ। नमूना सन्देश यो केहि हुनेछ।
“ज्ञानको तिर्खा मेट्नुहोस्। सस्तो मूल्यहरूमा gen शप नाम at मा उपलब्ध सबै विधाहरूको पुस्तकहरू।
याद गर्नुहोस् कसरी सरल भाषा हो? यो सजिलैसँग पढ्नयोग्य छ, पाठकलाई अलमल्लमा पार्दैन वा उसको ध्यान हटाउँदैन। साथै, यसले तपाईंको लक्षित दर्शकहरूले वास्तवमा के चाहान्छ भनेर उल्लेख गर्दछ - सबै विधाको पुस्तक र एक सस्तो मूल्य। तपाईंले आफ्नो बुकशपलाई विज्ञापन गर्नुभयो जस्तो कि यो पुस्तक fanatics को लागी एक प्रमोदवन हो; तिनीहरूको आफ्नै किताब स्वर्ग।
तर कृपया यो सन्देश भर्ब्याटम मात्र प्रयोग नगर्नुहोस्। तपाईंको सन्देश अद्वितीय हुनु पर्छ; इन्टरनेटमा केहि को एक नक्कल प्रतिलिपि होईन।
यसलाई आफ्नै शब्दहरू फेला पार्न उदाहरणको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्।
सँधै याद राख्नुहोस् कि सन्देश छविहरू र ढाँचाहरू र आकारहरूमा प्राथमिकता लिन्छ।
यो स्टेपिpping्ग स्टोन हो, एक बलियो आधार। यदि तपाईंको जग हल्लिएको छ भने, तपाईंको ब्रोशर कार्डको घर झैं झर्दै छ।
मेरो के हो लक्षित बजार?
पक्कै पनि, यो ब्रोसर एउटा निश्चित समूहमा आधारित छ। तर यी मानिसहरु को हुन् र म तिनीहरुलाई कसरी भेट्छु?
बिभिन्न दर्शकहरुको रुचि फरक हुन्छ। तपाईं समान ब्रोशर रचनात्मक डिजाइनर र फोटोग्राफरहरूको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न; त्यो भ्रम हुनेछ - एक अक्षम्य गल्ती।
यस्तो गम्भीर गल्ती गर्नबाट जोगिन, आफैलाई निम्न प्रश्नहरू सोध्नुहोस्।
मेरो आदर्श ग्राहक को हो?
उसलाई के मन पर्छ?
उसलाई के मन पर्दैन?
उसले मेरो सेवाहरू वा उत्पादनबाट के चाहान्छ?
के उहाँ एक मिलेनियल बच्चा हुनुहुन्छ जो पाठ भन्दा छविहरू ग्रहण गर्न योग्य छ वा नियमित उत्पादक जुन पुरानो ग्रम्प हो जुन तपाईंको उत्पादहरूको विनिर्देशहरूको बारेमा चिन्तित छ?
विगतमा उहाँलाई फसाउन कस्ता रणनीतिहरू काम गरिरहेका छन्?
यी सबै प्रश्नहरू तपाईंको आदर्श ग्राहकको वरिपरि घुम्छन् किनकि अन्तमा, उही एक मात्र हो जसले वास्तवमै महत्व राख्दछ। उहाँ एक सुनको मानक हुनुहुन्छ, अन्य सबै ग्राहकहरूको लागि टचस्टोन।
म कसरी मेरो ब्रोसरको सफलताका बारे मापन गर्न सक्छु?
तपाईंको ब्रोशरको सफलताको आकलनले सर्वोपरि महत्त्व राख्दछ।
यदि तपाइँको ब्रोशरले धेरै बेच्दैन, र तपाइँ यसलाई रोलिंगमा राख्नुहुन्छ जस्तो कि यो सफलताको लागि गोप्य घटक हो, तपाइँ तपाइँको समय र पैसा बर्बाद गरिरहनु भएको छ।
कहिलेकाँही, हामी ब्रोशर डिजाइनमा यति धेरै मेहनत र श्रमसाथ श्रम राख्छौं कि हामी अन्धा हुन्छौं। यो राम्रोसँग प्रदर्शन गरिरहेको छैन र संख्याहरू उत्पादन गर्दैन भन्ने तथ्यलाई स्वीकार्नुको सट्टा हामी अस्वीकार गर्दछौं।
कहिलेकाँही, तपाईले स्वीकार्नु पर्दछ कि वस्तुहरू ट्र्याकमा ल्याउन कुल सुधारको आवश्यक छ।
यहाँ केहि सरल तरीकाहरु छन् तपाइँको ब्रोशर को बिक्री संख्या मापन गर्न।
मा स्लाइड कुपन वा तपाईंको ब्रोसरमा भौचर गर्नुहोस् र ती मध्ये कति जना तपाईंको स्टोरमा रिडीम छन् गणना गर्नुहोस्। यसले तपाईंलाई मोटा अनुमान दिन्छ, केहि हिसाबमा।
यदि यो ई-ब्रोशर हो, तपाईंको वेबसाइटको लागि डिजाइन गरिएको हो भने, तपाईं प्याम्फलेटमा यूआरएल घुसाउन र यातायात ट्र्याक गर्न सक्नुहुनेछ।
यस ब्रोशरमा म कति खर्च गर्न सक्छु?
तपाईको जेबमा केवल केही सयको साथ हजारौं पाउण्ड खर्च हुने ब्रोसर डिजाइन बनाउने यात्राको शुरुआत गर्नुहोस्, र तपाईंले बाँकी दिनहरू समुद्रमा तन्कनु पर्नेछ।
ब्रोशरको कुल लागतको विश्लेषण गर्दा, निम्न कारकहरू काममा आउँछन्।
तपाइँ छाप्न चाहानु भएको ब्रोशरहरूको संख्या।
प्रिन्टिंग टेक्निकको लागत
सधैं मनमा कुनै न कुनै बजेट छ र त्यस हिसाबले हिसाब गर्नुहोस्। तपाइँको बजेटले निम्न निर्णयहरु लाई आदेश दिनेछ।
प्रयोग गरिएको चित्रको प्रकार
अवश्य पनि, यदि तपाईंसँग ठोस बजेट छ भने तपाईं उत्तम कागजमा लगानी गर्न सक्नुहुनेछ, उत्तम मसी पनि इत्यादि। तर उत्तम डिजाइनहरूले बैंकलाई तोड्दैन। तिनीहरू स्मार्ट छनौटहरूको एक मात्र हुन्। अन्त्यमा, यो सबै उमाल्दछ प्रत्येक बोकरीको बाहिर उत्तम निचोर्न।
सम्बन्धित: यो पुस्तिका तयार पार्न कति खर्च हुन्छ?
अन्तमा, ब्रोसर डिजाईन गर्दै
तपाइँ सोच र योजनाको साथ काम सकिसकेपछि, यो तपाइँको म्याग्नुम ओपस निर्माण गर्ने समय हो, एक रचनात्मक डिजाइन जुन तपाइँको पाठकहरूमा जादू गर्दछ।
तपाईंको ब्रान्ड व्यक्तित्वको साथ अनुरूप तपाईंको डिजाइनको एलिमेन्टहरू छनौट गर्नुहोस्
मेरो के हो?
म यो उदाहरणलाई उदाहरणको साथ स्पष्ट पार्न चाहन्छु।
मानौं तपाईं वकीलहरूको लागि अनलाइन शैक्षिक प्लेटफर्म खोल्दै हुनुहुन्छ। तपाईं जटिल कानून अवधारणासँग सम्बन्धित भिडियोहरू अपलोड गर्दै हुनुहुन्छ, अन्तर्क्रियात्मक क्विज र कानूनको विद्यार्थीहरूलाई मद्दतको लागि अर्को होपला बनाउँदै।
अब, तपाईं वास्तवमै गुलाबी र चम्किलो ब्रोशर बनाउन सक्नुहुन्न। कानून एक सम्मानजनक पेशा हो। कालो रंग यसको साथ सँधै सम्बन्धित छ। आंशिक रूपमा किनभने वकिलहरूले कालो अधिवक्ता गाउन लगाउँछन्।
त्यसो भए, तपाईं कालो र or वा त्यस लाइनहरूमा केहिसँग जानुहोस् र बाँकी विवरणहरू छनौट गर्नुहोस् - फन्ट, छविहरू - तपाईंको लक्षित दर्शकहरूलाई दिमागमा राख्दै।
तपाईंको ब्रान्ड पहिचान कुञ्जी हो। यसलाई जान्नुहोस्, यसलाई अध्ययन गर्नुहोस् र तपाईंको डिजाइनलाई आकार दिनुहोस्।
ब्रोशरको प्रकार छान्नुहोस्
यो तपाइँको लागि नयाँ जानकारी हुन सक्छ, तर ब्रोशरहरू विभिन्न पट्टिहरूको विभिन्न प्रकारका हुन्छन् - जम्मा १ 15। सही ब्रोशर प्रकार छनौट गर्नु मुश्किल व्यवसाय हो, कम्तीमा भन्नुपर्दा।
तपाईले दिमागमा राख्नु पर्ने कुरा के हो भने कि ब्रोशर डिजाइनको छनोट तपाईको ब्रान्डको सन्देशमा निर्भर गर्दछ।
यदि तपाइँको ब्रान्ड को सन्देश सरल र केहि वाक्यहरु लाई सम्मिलित छ, एक क्लासिक ट्राई-फोल्ड पर्याप्त हुनेछ। जहाँसम्म, यदि तपाइँ जानकारीको बन्डल व्यक्त गर्न चाहानुहुन्छ, एक --प्यानल रोल फोल्डर वा --प्यानल रोल फोल्डर अधिक उपयुक्त विकल्पहरू हुन्।
यदि तपाईं एक टेक्निकल ब्रान्डको मालिक हुनुहुन्छ र तपाईंको ब्रान्डको सन्देशलाई परिष्कृत गर्न र प्रस्ट्याउन चरण-देखि-चरण ट्यूटोरियल दिन चाहनुहुन्छ भने, यससँग जानुहोस्। चार प्यानल रोल फोल्डर.
साथै, तपाइँ कसरी आफ्नो ब्रोसर प्रस्तुत गर्न लाग्नुहुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुहोस्।
के तपाईको ब्रोशरले शिल्फमा ठाउँ ओगटेको छ?
के तपाईं यसलाई झोलामा अन्य प्रोमोशनल ट्रिटहरूको साथ निस्किने जाँदै हुनुहुन्छ?
तपाईं यसलाई मेल गर्न जाँदै हुनुहुन्छ?
कुन जानकारी तपाईको ब्रोशरको लागि राम्ररी टाढा जान्छ भन्ने कुरामा यो जानकारीले निर्णायक भूमिका खेल्छ।
ग्राफिक गोला बारुद जम्मा गर्नुहोस्
डिजाईन इंक गर्नु भन्दा पहिले तपाईको प्रतिलिपि र छविहरू भेला गर्नुहोस्। यो सुनिश्चित गर्दछ कि तपाइँको डिजाइन अनियर्ड स्टपपेज का सामना गर्दैन, र लेआउट, फन्ट आकार इत्यादि को बारे मा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गो गोमा गरेका छन्।
तपाईको प्रतिलिपिको लागि सहि साइज छनौट गर्नुहोस्
पाठको ती ठूला आकारका ब्लकहरू सुझाव दिइदैन। तिनीहरूले धेरै ठाउँ ओगटेका छन् र पाठकलाई अलमल्लमा पार्छन् र अलमल्लमा पार्दछन्। तर अत्यधिक सानो प्रतिलिपिको लागि नजानुहोस् कि कि पाठकहरूले एक आवर्धक शीशाको बाक्लो लेन्स मार्फत हेर्नु पर्छ। बीचमा केहि छनौट गर्नुहोस्।
हेडलाइटहरू र उपशीर्षकहरू, बुलेट पोइन्टहरू, फुटरहरूले तपाईंलाई तपाईंको पाठ संरचना गर्न मद्दत गर्दछ, यसलाई आकर्षक आकार दिनुहोस्। आकर्षक र छिद्रित हेडलाइन्सहरू तपाईंको तारकीय पहिलो छाप बनाउने मौका हो। यस मौकालाई खेर जानु नदिनुहोस्।
अब केवल ती छविहरू घुसाउनुहोस् जुन तपाइँसँग मिल्दो छ ब्रान्ड कथा, उपयुक्त स्थानहरूमा, र बाँकी छोड्नुहोस्।
इन्स्टाग्राम र टम्ब्लरको यस युगमा, ग्राफिक क्यान्डी दर्शकहरूलाई अरू केहि भन्दा बढी मोहित पार्छ।
तपाईंको शैलीले फरक पार्नुहोस्
अन्तमा, शैलीगत तत्त्वहरूले तपाइँको डिजाइनमा त्यो परिष्कृत स्पर्श राख्दैछन्।
सौंदर्य विवरण को एक अतिरिक्त गर्न को लागी हैन
केही व्यक्ति ब्रोशरहरू डिजाइन गर्छन् जुन यस्तो देखिन्छ कि मानौं कसैले ध्यानपूर्वक सबै चमक र पाठ र यसमा छविहरू छिराएको छ। कस्तो भद्रगोल!
यसलाई सफा र सफा राख्नुहोस्।
अन्यथा, यो पाठकको स्नायुहरूमा पुग्छ, उसलाई व्याकुल बनाउँछ र उसलाई सुस्त बनाउँदछ।
हातले चित्रण गरिएको चित्रले साधारण डिजाइनलाई असाधारण भन्दा अलग गर्दछ। उपभोक्ता थकित छन्, हड्डीको लागि थकित छन्, उही डिजाईनहरू तिनीहरूको आँखाको अगाडि पप अप भएको देखेर। तिनीहरू सरलता चाहान्छन्, एक डिजाईन जसले उनीहरूको इन्द्रियलाई शीर्षक दिन्छ र उनीहरूको जिज्ञासा जगाउँदछ, केहि बेंसी बकवासले होइन कि उनीहरूलाई जम्मा पार्छ।
फरक सोच्न हिम्मत गर्नुहोस्। आफ्नो कल्पना खोज्नुहोस्। यस्तो चीजको साथ आउनुहोस् जुन पहिले कसैले सोचेको छैन। यसलाई जीवनमा ल्याउनुहोस्।
कल-टु-एक्शन किंग हो
सम्पूर्ण कारण तपाईले डिजाइन बनाउने कष्टकर समस्या भोग्नु भएको छ ग्राहकहरुलाई स्नेच गर्ने। त्यसोभए, यदि तपाइँ तिनीहरूलाई कार्य गर्न प्रलोभनमा हुनुहुन्न, तिनीहरूलाई तपाइँको व्यवसाय तिर त प्रलोभित गर्नुहुन्न, तपाइँ के गर्दै हुनुहुन्छ?
तपाईका सबै शारीरिक र मानसिक श्रमहरू कुनै गिलासमा पानी नभएको जस्तो छ।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको पाठकलाई कार्य गर्न बोलाउने पाठ स्पष्ट छ र पाठको बोल्डर मुनि लुकाइएको छैन। तपाईले यो देख्न चाहानुहुन्छ। स्पष्ट रूपमा। स्पष्ट रूपमा। निस्सन्देह।
साथै, यो तपाईंको ब्रोशरमा बहु स्थानहरूमा स्पट दिनुहोस्। त्यसोभए पाठक कुन पृष्ठमा स्किम गर्दैछ भन्ने कुरा फरक पर्दैन, लिनको लागि त्यहाँ त्यहाँ सीटीए सही छ।
तपाईंको ब्रोशर रोलिंग गर्दै: अन्तिम चरण
डिजाईन सकियो र धुलो भयो। तपाईं विश्वलाई देखाउनको लागि लगभग तयार हुनुहुन्छ। तर पर्खनुहोस्, त्यति छिटो होइन, अझै केहि गर्न बाँकी छ।
यो एक अन्तिम समय प्रमाण
त्रुटिहरू जाँच गर्न वा परिवर्तनहरू गर्न यो तपाईंको अन्तिम मौका हो। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले यस अवसरलाई याद गर्नुहुन्न। एउटा सानो गल्तीले दिनको कडा परिश्रम बर्बाद गर्न सक्छ।
तपाईंको ब्रोशरलाई एक स्कोर दिनुहोस्
ब्रोशरको सन्देशका लागि पोइन्टहरू
ग्राफिक अपीलको लागि अंकहरू
कल-टु-एक्शनको लागि पोइन्टहरू
ब्रान्ड पहिचानको साथ स्थिरताका लागि पोइन्टहरू
त्यसोभए आफैलाई सोध्नुहोस्, के तपाईंको चित्त बुझाउने अन्तिम अंक हो? यदि होईन भने कसरी सुधार गर्न सक्नुहुन्छ?
र यी प्रश्नहरू आफैलाई सोध्नुहोस्। एक दोस्रो, तेस्रो वा चौथो राय लिनुहोस् यदि तपाइँसँग छ भने।
सहि मुद्रण सेवा छनौट गर्नुहोस्
एक अत्याधुनिक प्रिन्टिंगले तपाईंको अन्तिम ब्रोशर डिजाइनमा भिन्नता ल्याउन सक्छ। एक औसत सेवा छनौट गर्नुहोस् र तपाइँको डिजाइन एक pixelated, blurry संस्करण को रूप मा तपाईं कल्पना गरे को बाहिर आउँछ।
म तपाईंलाई कडा सल्लाह दिन चाहन्छु कि प्रिन्टरको सेवाहरु प्राप्त गर्नुहोस् जुन ब्रोशर प्रिन्टिंगको इतिहास छ, अत्याधुनिक उपकरणहरू छन्, र कुशल डिजाइनरहरूको फौज तपाईको डिजाईनमा कुनै समस्याहरू घटनास्थलमा समाधान भयो।
साथै, आफ्नो ब्रोसरको लागि सबै भन्दा राम्रो प्रिन्टि materials सामग्रीको बारे निर्णय लिनको लागि तपाइँको मुद्रण सेवासँग परामर्श लिनुहोस्। यहाँ छुनुहोस् केहि महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू।
यो मोटाई र ब्रोशरको वजन आफ्नो मनपर्ने को लागी सुनिश्चित गर्न को लागी हो।
कागजलाई अन्तिम रूप दिइसकेपछि यो समाप्त हुने अन्तिम समय हो। यहाँ तपाईका विकल्पहरू छन्।
म्याट: ओसिलो प्रतिरोधी फिनिश जसले सबै चमक हटाउँदछ र समतल चिल्लो फिनिश दिन्छ।
अर्ध-चमक: म्याट र चमकदार समाप्तिको मिश्रण। यो चम्किला तर चमकदार छैन।
चमकदार: अत्यधिक चिंतनशील। यसले एक चम्किलो चमक प्रदान गर्दछ।
फेरि, समाप्त को छनोट ठूलो हदसम्म तपाइँको ब्रान्डको पहिचान र सन्देशमा सवारी हुनेछ।
केहि मुद्रण सेवाहरु केहि विशेष सुविधाहरु प्रदान गर्दछ कि तपाइँको ब्रोशर को लागी एक अतिरिक्त - केहि प्रदान गर्दछ। यहाँ तिनीहरू मध्ये केही छन्।
यूवी स्पट: तपाईंको पाठ र छविहरूलाई एक चम्किलो बनावट दिन्छ।
एम्बोस: पृष्ठभूमिमा छविहरूलाई छोड्नुहोस् उनीहरूलाई माथिल्लो देखिन्छ।
पन्नी: एक किरण मसी हो कि एक चम्किलो चमक प्रदान गर्दछ।
यो कसरी ब्रोसर बनाउने बारेमा विस्तृत गाइड हो जुन तपाईंको दर्शकहरूको अगाडि ठोस बयान गर्दछ। हरेक निर्देशनलाई ध्यानपूर्वक पालन गर्नुहोस् र तपाईंसँग एउटा ब्रोशर हुनेछ जुन तपाईं र तपाईंको ग्राहक दुबै मनपर्दछ।
Bra ब्रान्डि ofका फाइदाहरू के हुन्?
ब्रोसर डिजाइन के हो? →